Iphupha malunga neLaxative ▷ ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Laxatives: intsikelelo okanye isiqalekiso? Abanye abantu basebenzisa laxatives ukunciphisa kakhulu ubunzima babo. Ukugqithisa kunokuba yinto embi ngokukhawuleza. Umzimba usetyenziswa kakhulu ukungenisa, ucime iinkqubo zawo, kwaye awusakwazi ukusebenza ngaphandle kwesiyobisi. Kubantu abaneengxaki zokwetyisa, i-laxative enjengeoyile ye-castor inokunceda ukuphucula impilo yabo. Unokuxhasa umzimba wakho ngokutya okulawulwayo.
Ithetha ntoni isimboli yokulala "laxative"? Ithetha ukuthini ukukuxelela? Luluphi utoliko olukhoyo ekutolikeni kwamaphupha? Cinga kwakhona ngephupha lakho kwaye ujonge kuzo zonke iinkcukacha. Ukuba kukho imfuneko, bhala amanqaku. Ukutolikwa ngokuchanekileyo kwamaphupha, ayingobalinganiswa bephupha kuphela ekufuneka betolikwe. Zonke iinkcukacha zephupha zinokubaluleka kwaye kufuneka zibandakanywe.
1 Uphawu lwephupha «laxative» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «laxative» - ukutolikwa kwengqondo
3 Umqondiso wephupha le- «laxative» -ukutolikwa kokomoya
Uphawu lwephupha «laxative» - ukutolikwa ngokubanzi
Uphawu lwe "laxative" lwamaphupha lumele ukungaphepheki kutoliko lwamaphupha ngokubanzi. Imeko engathandekiyo kubomi bamaphupha. Ukuba umzekeliso iphupha "Ipilisi ekrakra iginyiwe", kodwa imeko yakho iya kuphucuka. Ukunyibilika kuyanyibilika kumoya ocekeceke kunye neengxaki ngaphakathi el mundo Ukuvuka kungasombululwa.
Ukuba ukuphupha kukwimeko enxunguphalisayo ebomini bokuvuka, uphawu lwephupha luthetha "isisu" kuye, ekufuneka awasebenzise onke amathuba anikwe wona ukucacisa lo mbandela.
Ukuthatha i-laxative ephupheni kunika iphupha umkhondo wokuba uphethe iimvakalelo ezininzi ezingalunganga kunye nawe kwaye ufuna ukuzisusa ngawo onke amandla akho. Ukuba oku kukuzingcikiva, eluhlaza IKummerUkuba kukuzisola okanye iinkumbulo zoxinzelelo, ukuphupha kuya kufunyanwa ngohlalutyo kwihlabathi elivukayo. Kule meko, uphawu lokulala "lwe-laxative" lukwaluphawu lokuqala kuka Ucoceko lwangaphakathi.
Ukuba iipinki zelaxative zilala esiswini, oku kukubonisa ukuba uyeke iimvakalelo zakho zokungcungcutheka inkqubo ebuhlungu kuyakuba kwilizwe lokuvuka. Kodwa emva koko, izityholo ziya kuphela ngonaphakade.
Ukuba ukulala usebenzisa i-laxative ngexesha lokulala ukunciphisa ubunzima, oku kukuchazwa ngokubanzi kokulala. Uphawu lwesilumkisoukuba kwihlabathi elivukayo usengozini yokutshintsha ukusuka ekulahlekelweni kwesisindo esilawulwayo ukuya kwingxaki yokutya.
Uphawu lwephupha «laxative» - ukutolikwa kwengqondo
Kutoliko lwengqondo lokulala, ukuthatha i-laxative ephupheni kutolikwa njengophawu oluvela kokungazi nto xa uphupha ukuba kufuneka isuse yonke into eyingozi emzimbeni wakho. Naye kufuneka ngcamangoBayakukhathaza ngokweemvakalelo, bakushiye ngasemva, kwaye bazame ukuphucula imeko edidayo kwihlabathi elivukayo.
Esi siphakamiso masingakhathalelwa ngamaphupha kwaye kuya kufuneka ufumanise ngohlalutyo oluchanekileyo ukuba yintoni esemva kwayo. Kuba ngamanye amaxesha ukugula ngengqondo kungazimela ngasemva kophawu "lwe-laxative".
Umqondiso wephupha le- «laxative» -ukutolikwa kokomoya
Ngokwenkcazo yamaphupha okomoya, isimboli yamaphupha ethi "laxative" sisikhokelo ku ukucocwa ngokomoya yesiporho. Ukuphupha kufanele kukukhulule kwiingcinga ezixineneyo.